UEFA Champions League Group H ga-eche ihu Başakşehir echi onye nkuzi Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, “Anyị meriri egwuregwu abụọ anyị n’otu ahụ. Anyị na Başakşehir ga-egwu egwuregwu nke atọ. Anyị ga-egwu otu egwu siri ike. Ọ bụrụ na anyị nwere ike igwu egwu nke ọma. Anyị chere na anyị ga-eji akara 3 laghachi n’ụlọ. “ kwuru.
Ya na Solskjaer na onye isi otu Harry Maguire gbara ogbako dijitalụ banyere egwuregwu Başakşehir na ọnọdụ kachasị ọhụrụ nke ndị otu ya.
“EKPERE SHERE NA AKW FỌL”
Na-echetara na ha tufuru egwuregwu ikpeazụ ha na Premier League, Solskjaer kwuru, sị, “” Anyị na-atụ anya ịrụ ọrụ ọma site n’aka ndị egwuregwu anyị niile. Mgbe ụfọdụ ị nwere ike ida egwuregwu ị lụrụ nke ọma. Anyị chefuru egwuregwu a ma lekwasị anya na egwuregwu na-esote. Anyị chere na anyị nwere ike ịkụ mmadụ niile egwu mgbe anyị na-egwuri egwu n’ọkwa dị mma. Enwere obere mperi nke njehie. E nwere ezigbo akara n’etiti ihe ịga nke ọma na ọdịda. Anyị na-eme ihe niile anyị nwere ike ime. “ kwuru.
Solskjaer kwuru na onye bọọlụ bọọlụ gara aga na Manchester United Roy Keane ekwenyeghi na okwu ndị “Onweghi onye ndu n’egwuregwu ahụ” , na e nwere ọtụtụ ndị egwuregwu na-eduga na otu na mgbe ha nwetara nsonaazụ na-adịghị mma nke a ekwesịghị ịkọwa ya na otu ahụ dum .
“BAŞAKŞEHİR B TE TELỌ NKE siri ike”
N’igosi na asọmpi Başakşehir ahụ ga-abụ ihe siri ike, Solskjaer kwuru, “Anyị meriri egwuregwu abụọ anyị n’otu ahụ. Anyị ga-egwu Başakşehir egwuregwu nke atọ anyị. Anyị ga-egwu otu egwuregwu siri ike. Ọ bụrụ na anyị nwere ike igwu egwu nke ọma, anyị ga-alọta ebe anyị nwere akara 3.
Solskjaer kwuru na otu ndị Turkish nwere ọkụ ọkụ, na egwuregwu a ga-egwu na-enweghị ndị na-ege ntị ga-adị iche n’ihi ụdị ọrịa coronavirus ọhụrụ (Kovid-19).
“ANY TO NA-ACHỌ CBỌTA ND V A PICTARA ANY V ND TO FANS”
Onye nkuzi Solskjaer kesakwara ozi ahụ na a gaghị akpọrọ onye otu egwuregwu bọọlụ otu ahụ, bụ Jesse Lingard na Istanbul maka egwuregwu echi.
Onyeisi ndị isi Manchester United Harry Maguire kwuru ebe a, “Anyị chọrọ ịnye ndị na-akwado anyị mmeri ha ga-eme emume. Anyị na-agbasi mbọ ike maka nke a. Anyị chọrọ ‘mechie ndị ndu anyị na otu’ site na mmeri egwuregwu Başakşehir.”
SUPERBAHİS RIZA ÇALIMBAY: GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK SUPERBAHİS983 NAZIM SANGARE: GÖKHAN GÖNÜL’E FORMAYI BİR DAHA VERMEM SUPERBAHİS983 GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: TÜRKİYE İÇİN TARİHİ BİR GALİBİYET SUPERBAHİS ERKAN ÇOKER: ÇOK POZİSYONA GİRDİK, DEĞERLENDİREMEDİK SUPERBAHİS983 BRENDAN RODGERS: ÇAĞLAR’IN İYİLEŞME SÜRECİ İYİ GİDİYOR SUPERBAHİS746 MOBİL BAHİS ÖDÜL SUPERBAHİS746 BAHİSLE KAZANÇ SAĞLA SUPERBAHİS983 JOSHUA KİMMİCH İLK YARIYI KAPATTI SUPERBAHİS FRANCE FOOTBALL: PSG, BAŞAKŞEHİR’E KARŞI EZİLDİ SUPERBAHİS983 VİNCENT ABOUBAKAR SADECE 1 GOL ATABİLDİ
MURAT November 21, 2020 at 11:50 am
YILAYDIN November 25, 2020 at 12:30 am
süperbahis bonus öneren var mı
BURKHAN November 26, 2020 at 2:00 pm
süperbahis giriş türkçe kaçak iddaa siteleri